Gargaar News | Cabdi Qaybdiid muxuu ka fa’iidaa colaadda iyo hanjabada Puntland iyo xusuusin dhibatoyinkii uu shalay gaystay.
Posted on October 3, 2016 by Laylo Mahamud	Cabdi Qaybdiid muxuu ka fa’iidaa colaadda iyo hanjabada Puntland iyo xusuusin dhibatoyinkii uu shalay gaystay.
Madaxweynihii hore Galmudug ayaa caado ka dhigtay u hanjabaada iyo inuu hadalo dhiilo xanbaarsan u jeediyo Puntland markasta oo xiisad ka aloonsanto Gobolka Mudug.
Dagaaladii Sokeeye ee Gen Caydiid uu ku soo qaaday Gaalkacyo horantii sagaashamadkii Qaybdiid wuxuu ahaa horjoogihii xasuuqay guurti iyo dad badan oo birimagaydo ah.
Intaas keliya ma aheen dhibaatada uu cabdi Qaybdiid gaystay waxaan baaritan aan sameeyey aan ku ogaaday in ku lug lahaa dagaaladii Jubooyinka gaar ahaan Kismayo xooga looga saaray Gen Moorgan iyo guud ahaanba beesha Harti oo kismayo ah beesha ugu badan.
Dagaaladii xilli si kadisa ku bilaamay 2009 una dhaxeeyey xukuumadii Faroole iyo xubno Alshabab balse khalad yimid dagalkasi isku rogay mid xukumadaas iyo beel ka mid ah kuwo Puntland isku rogay Qaybdiid wuu hurinayey hanjabad ayuuna Puntland Saxaafadda usoo mariyey.
Dowladii Cabdilaahi Yuusuf waxaan xasuusta anoo markaas Puntland jooga in si nabadda uu ku dhex mushaaxi Jiray degaanada Puntland oo wuxuu imaan jiray kulliyada ciidamada Booliiska Somaliya ee Carmo madaama uu ahaa Taliyaha ciidanka Booliiska.
Isagoo aan xil ka hayn Galmudug waqtigii Maxamed Caalim ayaa khilafyo dhexmaray Puntland iyo Galmudug oo isku soo dhex tuuray markastana sida bisadu jiirka ugu orodo buu Puntland af iyo adinba ugu soo ordaa ceebtii kudhacdayna waa la wada ogaa.
Waa yaabe Galmudug iyo Habar gidir qabqablahan ma waxay ku xuuxiyaan Puntland mise waxaa u macansaday dhiigii uu hore u daadiyey oo ku nabad galay.
Intaas oo dhan aan kasoo gudbo waxan la yaabay warbixintan aan u diyaariyey waxa yaab igu noqotay hadalo uu duqayntii Maraykanku Alshabaabka ku dileen ka dib uu jeediyey kuwaaso uu Puntland ugu soo hanjabay.
Si caadifadaysan oo u muuqata halyey magaac ku helay dhiiguu hore u daadiyey iyo caadawada uu markasta u hayo dowladda Puntland iyo shacabkeeda ayuu loo soo shaqo tagay miyuusan ogayn in ay puntland joogan kuwii shalay hawiye raran jiray hadii loo baahadan ay maanta mar kale dhirbaaxooyinkii dib u bilaabi karan.
Hadaladu yiri waxaa ka mid ahaa “Puntland waxay samaysay faan iyo in ay ku faaneen ciidamdii lana ka dilay xisaab bay galaysaa”ayuu yiri qaswade Qaybdiid fasirada hadalkan waa fariin adag oo hanjabaada ah.
Qaybdiid xilligan wax xila kama hayo Galmudug khudbadii Guleed oo madaxweyne ka ah Galmudug ma jeedin hadalo hanjabaada iyo kuwo xitaa u dhaw guleed baan dhihi karan hadalada qaybadiid wax ka soo yeeray.
Cabdiqaybdiid intuu nool yahay ma wuxu taagnanayaa waxyeelada Puntland?
Ma wuxuu noqday mid lagu cabsi geliyo shacabka iyo dowladda Puntland sida sheeko xariiroyinka caruurta dad qalatoyinka lagu cabsi gelin jiray?
Mise tanaasulka iyo midnimo jacaylka shacabka Puntland ayuu u arkay inay ka cabsanyaan?
Qaybdiid oo gaboodfalo badan horey u gaystay gaar ahaan Puntland ma la joogaa waqtigii cadaaladda la horkeeni lahaa ama si kale loo soo afjari lahaa?
Jananada iyo Saraakiisha ay isku waqtiga ahayeen ee Puntland ka soo jeedan xilligan kama qayb qataan gar iyo gardaraba dagaalada iyo khilaafyada Puntland iyo Galmudug dhex mara inay nabadda ka shaqeyaan ma,hane?
Adiga maxay kula tahay maxaase xal u noqon kara shaqsigan maalin kasta la soo taagan wax baan dilayaa,intay nabaddu jirtan shiiqa amaba an la arkin?
Maqaalo	Post navigation